Ganacsade Xuseen Goleey oo ku dhaawacmay qarax baabuurkiisa lagu soo xirey oo ka dhacey suuqa Bakaaraha – idalenews.com
Ganacsade Xuseen Goleey oo ku dhaawacmay qarax baabuurkiisa lagu soo xirey oo ka dhacey suuqa Bakaaraha
Ugu yaraan 3 Ruux oo ka mid yahay Ganacsade caan ka ah Magaalada Muqdisho ayaa ku dhaawacantay Qarax Khasaaro gaystay oo maanta ka dhacay agagaarka Suuqa Bakaaraha Degmada Howl-Wadaag ee Gobolka Banaadir.
Qaraxan ayaa sida la sheegay waxaa uu ka qarxay Gaari uu lahaa Ganacsade Xuseen Goleey isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray Qaraxaasi waxaana la sheegay in dhaawaciisa loola carary Mid kamid ah Isbitaalada Magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu dhaawac uu yahay mid uu ka soo gaaray dhina lugaha
Goobjooyaal la hadlay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Qarax uu ahaa mid xoogan isla markaana uu ku xirnaa Gaari uu watay Ganacsade Xuseen Goleey taasi oo dhalisay dhaawac 3 Ruux oo Rayid ah.
Ilaa iyo iminka lama oga cidda ku xirtay Qarax Gaariga Ganacsade Xuseen Goley hase ahaatee Dhaawaciisa ayaa loo qaaday mid kamid ah Isbitaalada Magaalada Muqdisho si loogu dabiibo.
Wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan Dhaawaca Ganacsade Xuseen Goley ayaa xaqiijinay in laga qaaday Garoonka Diyaaraha Muqdisho loona Duuliyay dhinaca Nairobo loona sii qaadi doono sida qorshu yahay dhinaca Dalka Jarmalka.
Majiro cid ka hadashay Qaraxa Khasaraha gaystay ee maanta ka dhacay Agagaarka Suuqa Bakaaraha degmada Howl-Wadaag ee Gobolka Banaadir.
Xildhibaano dowlada Federaalka Somalia ka tirsasn oo Nairobi ka soo duulay ayaa gaarey Kismaayo
Dhageyso: Maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe oo sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan Markab Mucaawino oo Kismaayo ku soo fool leh